Football Khabar » कोपा डेल रे : क्वार्टरफाइनलको ‘ड्र’ बारे सम्पूर्ण जानकारी
कोपा डेल रे : क्वार्टरफाइनलको ‘ड्र’ बारे सम्पूर्ण जानकारी
स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत अन्तिम आठ (क्वार्टरफाइनल) को ड्र आज हुँदैछ । गत राति अन्तिम १६ का दुई खेल सकिएसँगै अन्तिम आठको समीकरण पूरा भएको हो । गत राति अन्तिम खेलबाट बार्सिलोना र तल्लो श्रेणीको टिम मिरान्डेज क्वार्टरमा प्रवेश गरे । जसमा ८ मध्ये ७ ला लिगा टिम क्वार्टरमा पुग्दा एक टिम तल्लो श्रेणीको छ ।
को–को पुगे अन्तिम आठमा ?
ला लिगा टिम – एथ्लटिक बिल्बाओ, ग्रानाडा, रियल मड्रिड, रियल सोसिडाड, भ्यालेन्सिया, भिल्लारियल, बार्सिलोना
सेगुन्डा क्लब – मिरान्डेज
अन्तिम आठको ड्र कहिले ?
प्रतियोगिताको अन्तिम आठको ड्र आज शुक्रबार हुँदैछ । ड्र स्पेनिस फुटबल संघको मड्रिडस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाली समयअनुसार आज साँझ ५ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ । ड्र को लाइभ स्पेनिस फुटबल संघको अफिसियल वेबसाइटमार्फत् हेर्न सकिनेछ । त्यस्तै, संघको युट्युब च्यानलबाट पनि लाइभ हुनेछ ।
अन्तिम आठका खेल कहिले ?
ड्र सार्वजनिक भएपछि क्वार्टरफाइनलका खेल फेब्रुअरीको ४, ५ र ६ तारिखमा हुनेछन् । त्यसपछि सेमिफाइनलका लागि भोलिपल्टै फेब्रुअरी ७ तारिखमा ड्र हुनेछ ।
प्रकाशित मिति १७ माघ २०७६, शुक्रबार ११:५५